FreeOffice 7.2.1, iyo yekutanga yekuvandudza mune ino nhevedzano, inogadzirisa 87 bugs | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi inopfuura mitanhatu yekuvandudza, Iyo Gwaro Sisekelo yakakanda masvondo apfuura vhezheni 7.2 yehofisi yayo suite ine mitsva maficha senge murairo mutsva HUD yekutsvaga nekuita zviito. Nhasi chete vhiki rapfuura ivo vatangisa iyo yechitanhatu poindi yekuvandudza kubva pane zvakateedzana izvo zvichiri kukurudzirwa zvikwata zvekugadzira, ndokuti, v7.1.6 iyo yavakaruramisa nayo 44 bugs. Masikati ano, TDF akakanda LibreOffice 7.2.1, yekutanga yekugadzirisa yekuvandudza yeiyo 7.2 akateedzana.
Pachiitiko ichi, chirongwa ichi hachina kunyora tsamba refu vachitaura pamusoro pezvinhu zvitsva. Akango taura izvozvo vakagadzirisa 87 bugs uye zvishoma senguva dzose, zvinozovandudza kugarisana nemhando dzakasiyana dzemagwaro. Kunyangwe zvisati zvataurwa nenzira iyoyo, zvinogona kuvandudza kuenderana nemicrosoft Office zvinyorwa.
LibreOffice 7.2.1 haisati yakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira
LibreOffice 7.2.1 Nharaunda, yekutanga diki vhezheni yeRibreOffice 7.2 yemhuri inovavarira vanofarira tekinoroji uye vashandisi vemberi, inowanikwa kurodha pa https://www.libreoffice.org/download/. Kuburitswa uku kunosanganisira 87 bug fixes uye gadziriso inoenderana gwaro.
Kamwe zvakare, uye zviri nyore kufunga kuti zvichave nenzira iyi zvachose kubvira LibreOffice 7.1 yaburitswa, ivo vayeuka zvakare kuti kune maviri akasiyana mavhezheni, iyo Nharaunda uye Bhizinesi. Iyo yenharaunda yakafanana neyakagara, iyo yatinotora kurodha mahara uye pasina rutsigiro rwakakosha, nepo iyo yemakambani inogamuchira rutsigiro rwakananga kubva kuchikwata uye inogona kukumbira mabasa pane zvinodiwa.
Kunze kweshanduro dzine mavara akasiyana, kune dzimwe nzira mbiri dzinowanikwa dzemhando mbiri dzevashandisi, iyo inosanganisira zvese nhau asi isina kuyedzwa zvishoma uye iyo isati iine zvese zvitsva, asi yakanyoroveswa. LibreOffice 7.2.1 haisati yakurudzirwa kumatimu ekugadzira, asi ikozvino inogona kutorwa kubva ku website yepamutemo. Vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi DEB neRPM mapakeji kubva ipapo, asi izano rakanaka kumirira kugoverwa kwedu kuti tivandudze mapakeji kubva kune ayo epamutemo marekodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FreeOffice 7.2.1, yekutanga diki yekuvandudza mune ino nhevedzano inogadzirisa 87 bugs